Global Voices teny Malagasy » Toeram-pizahan-tany tsy dia fantatra loatra any Japana hita ao amin’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jona 2020 5:34 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Tsidika
Tamin'ny faran'ny volana Mey, nanidy ny sisintaniny i Japana tao anatin'ny ezaka fisorohana ny fifindran'ny valanaretina COVID-19 ka nandà ny fidiran'ireo olom-pirenena avy any amin'ny firenena miisa 111 farafahakeliny . Ankoatra ny fanakanana  ireo Japoney monina maharitra any ivelany izay nanasaraka azy ireo tamin'ny fianakaviany dia nanakatona ny fizahan-tany anatiny ny fanaraha-maso ny sisintany ka nahatonga ny isan'ny mpitsidika tao amin'ny firenena nihena ho 99,9 isan-jato  raha oharina tamin'ny herintaona.
Raha tsy namoaka vaovao  ny governemanta Japoney momba ny fanalefahana ny famerana ny fidirana dia misy ny paikady hanampiana  ny indostrian'ny fizahan-tany any Japana amin'ny alàlan'ny fandrisihana ny fitsidihana anatiny. Sarotra anefa izany ho an'ireo izay mety ho vahiny mpitsidika noho ny fandraràn'i Japana ny fivezivezena – indrindra ny amin'izao fotoana raha hikasa ny haka rivotra. Soa ihany fa nisy ny YouTube, fiara tonga lafatra ahafahanao mandamina ny fitsangatsangananao virtoaly ao Japana.
Nanatontosa lahatsary fohy mampiseho ny toerana mahaliana sy mahafinaritra ao amin'ny faritr'i Kansai  any andrefan'i Japana ny fantsona YouTube Anna Film Production . Faritra be mponina any afovoan-tanàndehibe faharoan'i Osaka ao Japana izay ahitana ireo renivohitra manan-tantaran'i Kyoto  sy Nara  ary ny tanàna seranan-tsambo ao Kobe . Ny fifangaroan'ny endrika an-tanàndehibe, ny toerana ara-kolotsaina ary ny hatsaran'ny tendrombohitra voajanahary no mahatonga izany ho toerana falehan'ny mpizahan-tany.
Sady nandefa lahatsarin'ny sasany amin'ireo toeram-pizahan-tany malaza any Kansai ny Anna Film Production, anisan'izany ny Buddha Lehibe ao Nara  sy ny toerana masina Fushimi Inari  ao Kyoto, ary eo ihany koa ny famelan'ny serizy  ary ny maiko  (fianarana geisha) any amin'ny toerana samihafa no sady nitondra ny mpitsidika amin'ny fitsangatsanganana virtoaly any amin'ny toerana mahaliana sasany, any amin'ny toerana mbola tsy fahita ihany koa ny fantsona.
Manasongadina ireo sisa tavela tamin'ny lapa voaaro efa rava izay naorina voalohany tamin'ny taompolo 1880 ho isan'ireo rafi-piarovan'ny morontsiraka any Japana ny Nosy Tomogashima  izay any amin'ny 100 kilometatra any atsimo andrefan'i Japana miala ny morontsiraky ny Prefektioran'i Wakayama.
Voalaza fa mitovitovy amin'i Laputa  ilay “Lapa Mitsingevana eny amin'ny Lanitra ” avy amin'ny sarimihetsika Studio Ghibli izay mitovy anarana amin'izany ny biriky mena ravarava any amin'ireo nosy ireo.
Ahafahantsika mandeha mankany Maizuru , any ambanivohitra avaratry ny prefektioran'i Kyoto, toerana izay mety ho sarotra halehan'ny mpizahatany avy any afovoan'i Kyoto na Osaka ity horonantsary ity.
Amin'izany dia atolotra antsika ny fitsidihana ny milina mpivarotra (distributeur automatique) fahiny tany amin'ny efa-polo taona lasa tany farafahakeliny, hita any amin'ny faritra fakana aina any amin'ny lalana manamorona ny renirano Yura , eo anelanelan'i Maizuru sy ny toerana ara-pizahantany Amanohashidate  izany.
Ahitana ireo trano fivarotana tsara fikojakojana ao Gokasho , any amin'ny ilany atsinanan'ny  Farihy Biwa. Rehefa miverina ny fizahantany anatiny ao Japana dia toa tsy ho hitan'i Gokokasho ireo vahoaka be dia be izay tany Kyoto tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Mbola misy ny toerana sarobidy betsaka tsara ho hita ankoatra ireo lahatsary fitsangatsanganana avo lenta ampolony. Ahitana tsikaritra ara-tantara tsy fahita firy ny fantsona, anisan'izany ny zava-misy tao Tokyo tamin'ny taona 1958 , Nagoya tamin'ny taona 1955  ary Nara tamin'ny taona 1954  raha mbola tena vaovao ho an'ny mpizahatany i Japana tamin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/06/04/148337/
 miisa 111 farafahakeliny: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 nihena ho 99,9 isan-jato: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/21/national/foreign-travelers-japan-decline-record-low-just-2900-april/#.XtKLgmhKhhE
 tsy namoaka vaovao: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/19/national/reopening-borders-coronavirus/#.XtKM82hKhhE
 faritr'i Kansai: https://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_region
 Buddha Lehibe ao Nara: https://youtu.be/7ompo-hrfVs
 toerana masina Fushimi Inari: https://www.youtube.com/watch?v=axtS3K2Hzpk
 famelan'ny serizy: https://youtu.be/ix7prSJaOHU
 Nosy Tomogashima: https://livejapan.com/en/in-kansai/in-pref-wakayama/in-wakayama-suburbs/article-a2000197/
 mitovitovy amin'i Laputa: http://www.simonearmer.com/tomogashima-japans-real-castle-in-the-sky/
 Lapa Mitsingevana eny amin'ny Lanitra: https://www.youtube.com/watch?v=8ykEy-yPBFc
 faritra fakana aina any amin'ny lalana manamorona ny renirano Yura: https://www.google.com/maps/place/Shinonome+Station/@35.473167,135.2834786,14.29z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x205350fd726be225!8m2!3d35.4749373!4d135.2848803
 ilany atsinanan'ny: https://en.wikipedia.org/wiki/Gokash%C5%8D,_Shiga
 Tokyo tamin'ny taona 1958: https://youtu.be/m_huLgNsJ9w
 Nagoya tamin'ny taona 1955: https://www.youtube.com/watch?v=umn1kJSNkj4
 Nara tamin'ny taona 1954: https://www.youtube.com/watch?v=Ic4RpUofqrw